चीनको भारतलाई चेतावनी – ‘सीमामा सम्झौता तोडियो, अब रक्तपातको लागि तयार रहनू’ « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं। भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा ४ दशकपछि पहिलोपटक गोली चलेसँगै चीनले भारतलाई रक्तपातको नयाँ युगको लागि तयार रहन चेतावनी दिएको छ । भारत र चीनबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा दुवै देशले सीमामा गोलाबारुदजन्य हतियार प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ । यही सम्झौताअनुसार यहाँ ४ दशकदेखि गोली चलेको थिएन । तर, सोमबार अचानक यहाँ गोली चलेपछि चीनले भारतलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले आज सम्पादकीयमै यस विषयमा लेखेको छ । सम्पादकीयमा पिपुल्स लिबरेशन आर्मीको वेस्टर्न कमाण्डका प्रवक्ताको हवाला दिँदै लेखिएको छ ‘भारतीय सेनाले सोमबार पेगोंग तालको दक्षिणी किनारामा शेनपाओ पहाडी क्षेत्रमा अवैध तरिकाले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल पार गर्यो त्यसपछि गस्ती गरिरहेका पीएलएको अगाडि हवाइ फायर गर्यो । सीमामा गस्ती गरिरहेको चिनियाँ सेनाको टोलीले क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्नको लागि बाध्य भएर काउन्टर अट्याक गर्नुपर्यो ।’
ग्लोबल टाइम्सले भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा हतियार प्रयोग नगर्ने सहमति अनुसार विगत ४० वर्षदेखि यहाँ गोली नचलेको र गएको जून महिनामा दुवै पक्षका सैनिकको ज्यान जानेगरी ठूलो झडप हुँदा समेत दुवै देशका सैनिकले गोली नचलाएको स्मरण गर्दै अहिले भारतले गोली चलाउनु यो सहमति तोड्नु भएको बताएको छ । ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ ‘के भारत त्यो सम्झौता रद्द गर्न चाहन्छ ? यदि यस्तो हो भने चीन र भारत सीमामा रक्तपातको नयाँ युगको लागि तयार रहनुपर्छ ।’
ग्लोबल टाइम्सले अगाडि भनेको छ ‘भारतले सीमा विवादको विषयमा आक्रामक रुख अख्तियार गरिरहेको छ र भारतका आम जनतामा चीनविरोधी भावनामाथि कुनै नियन्त्रण छैन । हामीले भारतलाई गम्भीरतापूर्वक चेतावनी दिनुपर्छ तिमीहरुले सीमा पार गर्यौ । तिम्रो अग्रपंक्तिका सेनाले रेखा पार गरिसके । तिम्रो राष्ट्रवादी भावना अनियन्त्रित छ । चीनप्रति तिम्रो नीति हदभन्दा अगाडि बढिसकेको छ । तिमी पिएलए र चिनियाँहरुलाई अति आत्मविश्वासका कारण उक्साइरहेका छौ । यस्तो गर्नु भनेको भीरको छेउमा हातले उभिनुजस्तै हो ।’
ग्लोबल टाइम्सले भारतलाई चेतावनी दिँदादिँदै शान्तिको पक्ष पनि छोडेको छैन । उसले भनेको छ ‘चीन भारतसँग सीमामा युद्ध चाहँदैन । तर, यदि भारतीय पक्षले चीनको सद्भावलाई बुझ्न गल्ती गर्छ र वार्निङ शटबाट पीएलएलाई रोक्ने कोसिस गर्छ भने उसको यो कदम उसकै लागि घातक हुनेछ । चीन युद्धबाट बच्नको लागि झुक्ने छैन । भारतीय सेना नियम तोडेको नतिजा भोग्न तयार रहनुपर्छ । सैन्य संघर्षको स्थितिमा भारतको फ्रन्टलाइन सेनाको अस्तित्व नै मेटिन सक्छ । चीन भारतसँग सीमा विवाद शान्तिपूर्ण तरिकाले सुल्झाउन चाहन्छ तर पीएलए कुनै पनि सम्भावित परिस्थितिको लागि तयार छ ।’
आज बढ्याे सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कतिमा भइरहेकाे छ काराेबार ?
बेलायतमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको पहिलो दिन नै दुईजना विरामी, चेतावनी जारी